Tezitra noho ny delestazy ny teny Itaosy : noravan’ny Emmo/Reg ireo mpanakan-dalana, 5 voasambotra | NewsMada
Tezitra noho ny delestazy ny teny Itaosy : noravan’ny Emmo/Reg ireo mpanakan-dalana, 5 voasambotra
Par Taratra sur 09/10/2017
Nanakan-dalana sady nandrehitra kodiarana ny mponina teny Bemasoandro Itaosy, vokatry ny delestazy lavareny. Voatery nandrava ny Emmo/Reg, noho ny fiakaran’ny hafanana…
Nitroatra tampoka indray ny mponina teny Bemasoandro Itaosy, ny asabotsy teo, noho ny tsy fahafaliana ny amin’ny delestazy miverimberina sy lavareny. Nidina an-dalambe izy ireo, nandritra ny delestazy mihitsy tokony ho tamin’ny 7 ora hariva. Nanakana ny fiara mandalo, nandoro kodiarana teo am-povoan’arabe ireo olona ireo. Tonga teny an-toerana ny zandary avy eny Itaosy nandamina ireo olona ireo, saingy tsy nahasakana izany. Nisy mihitsy ireo nitoraka ny fiara nandalo tamin’ireo olona teny an-toerana. Voalazan’ny zandary fa saika nodoran’ireo ihany koa ny transformateur-an’ny Jirama.
Niantso vonjy ireo zandary teny Itaosy ka nidina avy hatrany teny an-toerana ny Emmo/Reg ary voatery nampiasa fitaovana fanaparitahana mba hifehezana ny toe-draharaha sy hitandroana ny filaminana. Nirefodrefotra, noho izany, ny grenady mandatsa-dranomaso ka nampitsoaka ireo olona marobe nitangorona teny. Voalazan’ny zandary fa mpitarika dimy no efa voasambotra hanaovana famotorana.
Tsy voalohany no efa nanao hetsika nampiseho fahatezerana toy izao ny olona eny Itaosy. Miverimberina loatra ny fahatapahan-jiro amin’ny faritra maro, ary misy aza maharitra izany. Toy izany koa ny eny Ambohipo, anisan’ny faritra mafana amin’ny fahatapahan-jiro ka matetika manao fihetsiketsehana ihany koa ny olona eny. Anisan’ny raharaha tsy ahitam-bahaolana maharitra tahaka ny pesta ihany koa ny delestazy. Mety hampitroatra ny olona raha izao no mitohy.
Une réponse à "Tezitra noho ny delestazy ny teny Itaosy : noravan’ny Emmo/Reg ireo mpanakan-dalana, 5 voasambotra"
laurencya 09/10/2017 à 10:26
Tsy maintsy manao hetsika foana zany zay vao mivaly foana fangatahana ataony vahaoaka raha vao tapaka jiro